Madaxweynaha Puntland Iyo Mas’uuliyiin Ka Tirsan Itoobiya Oo Ka Wada Hadlay Xiriirka Labada Dhinac – Goobjoog News
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay wehlinayaan xubno ka mid ah wasiirada maamulkiisa ayaa magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya waxa uu kula kulmay mas’uuliyiin ka tirsan dowladaasi oo ay ka wada hadleen arrimo u badan xiriirka Puntland iyo Itoobiya.
Gaas ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya oo waxyaabihii ay ka wada hadleen ay ugu badneyd siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale arrinta ku aadan nidaamka Puntland ay diiddan tahay ee 4.5.
Sidoo kale Gaas ayaa la kulmay taliyaha ciidamada Milatariga dalka Itoobiya oo ay ka wada hadleen xoojinta amniga xuduudaha iyo iskaashiga dhanka ciidamada.
Maanta oo Khamiis ah ayaa lagu wadaa in Cabdiweli Gaas uu la kulmo Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn oo arrimo u badan siyaasadda Soomaaliya ka wada hadli doonaan.
Puntland ayaa diiddan nidaamka 4.5 ee la doonayo in lagu soo xulo baarlamaanka soo socda ee dowladda Soomaaliya, waxaana jirtay dadaallo ay beesha caalamka ku dooneyso in Puntland ay kaga dhaadhiciso qaadashada go’aankaasi.
Puntland Oo Soo Gababagabeysay Doorashada 12 Xildhibaan
Gxuipk ozdmot Best price for cialis best place to buy cialis online reviews
Phqxeq smnjgf generic viagra cheap cialis
Qgdgtk bkgpqx Discount viagra pharmacy online
canadian cialis cialis online safe cialis superactive [url=h...
female pink viagra 100mg pills lowest price viagra no prescr...
cialis purchase canada health plus cialis coupons for cialis...
cialis pills australia cialis daily cheap cialis professiona...